Vaovao - Ahoana ny fandefasana ny kaomandinao?
Voalohany, ny departemanta QC dia hanamarina ny dingana tsirairay amin'ny famokarana, hiantoka ny vokatra farany rehetra mifanaraka amin'ny fenitra.
Ireto misy sary mampiseho ny fomba fiasan'izy ireo:
Fanamarinana ny akora
Afaka mandefa ny baiko an-dranomasina na an'habakabaka izahay, azonao atao ny misafidy ny fomba tianao na ny forwarder anao.
Amin'ny fitaterana an'habakabaka:
Amin'ny fitaterana an-dranomasina:
Container, entana betsaka
Ireto misy sary vitsivitsy momba ny fandefasana anay:
Ny dingana tsirairay amin'ny fanaterana entana dia hojeren'ny departemanta QC.Ary azonao atao ny misafidy ny fomba tsara indrindra handefasana entana araka ny fangatahanao.Hiezaka izahay mba hiara-miasa aminao na ny forwarder anao.
Ny tariby led linear rehetra dia voamarina.Tsy ho an'ny jiro batten LED ihany, toy ny: IP66nitarika fitting tsy mety andro, nitondra etona mafy linear fixtures, nitondra hazavana tri-porofo, Jiro fivarotana LED, jiro famonosana LED sy ny sisa.Inona koa.Manome fiasa samihafa ho an'ny mpanjifa samihafa sy fampiharana samihafa izahay.Toy ny: 3 Stepped microwave motion sensor ho an'ny tetikasa famonjena angovo 90%.Famerenana bateria vonjy maika ho an'ny lalantsara, tohatra afo, ambadiky ny trano, fiantsonan'ny fiara ambanin'ny tany sy ny sisa.Ny sasany manokana fepetra takiana, toy ny: Orange mifandray tariby, Fametrahana faladiany, Stainless vy Clips sy ny sisa.
Raha manana hevitra vaovao momba ny vokatra led ianao dia aza misalasala.Afaka manao ny santionany miaraka isika ary miezaka ny handresy ny tsena.Mazava ho azy fa afaka mankany amin'ny orinasanay ianao ary hijery.Miresaha amin'ny injenieranay momba ny hevitrao amin'ny antsipiriany ary hiezaka hanatontosa izany izahay.
Tongasoa eto mba hifampidinika sy hitsidika ny orinasa.Isika dia mpanamboatra matihanina izay mifantoka amin'ny LED linear fixtures nandritra ny folo taona mahery.Azonao atao ny matoky ny tsipika famokarana matihanina, departemanta QC, R&D ary Sales Team.